Fandaharanasa Angovo: herinaratra masoandro ho an’ny faritra ambanivohitra | NewsMada
Fandaharanasa Angovo: herinaratra masoandro ho an’ny faritra ambanivohitra
Mitohy ny fandaharanasa Angovo (Energies), iarahana amin’ny Vaomieran’ny ranomasimbe Indianina (COI), tetikasa vatsin’ny Vondrona eoropeanina vola. Fandaharanasa maharitra ho famokarana angovo avy amin’ny masoandro. Tanjona ny hampandrosoana ny toekarena amin’ny faritra iray, hitarika fanatsarana ny fari-piainan’ny mponina, araka ny toromariky ny mpamatsy vola.
Saika any amin’ny kaominina ambanivohitra ny ahitana famatsiana herinaratra azo avy amin’ny masoandro, mampandeha ireo milina samihafa, toy ny vata fampangatsiahana, ny fahitalavitra sy ny radio, ny jiro, ny milina samihafa, ny fisintonana rano avy amin’ny vovo sy ny fanadiovana izany, sns…
Maro ny tetikasa azo volavolaina any amin’ny tontolo ambanivohitra avy amin’io angovo mandeha amin’ny masoandro io. Anisan’izany ny fanampiana ireo mpanjono amin’ny fitaovana ilaina. Tetikasa atao indrindra ho fampandrosoana ny any ambanivohitra, iaraha- miasa amin’ny foibe iray misahana ny famatsiana herinaratra any ambanivohitra (Ader)*, araka ny fangatahana sy ny filàn’ny mponina.
Misy teknisianina nomena fiofanana amin’izao tetikasa famokarana herinaratra avy amin’ny masoandro izao, araka ny tetikasa any amin’ny tanàna misy azy. Jerena ny fomba mampahomby ny famatsiana herinaratra avy amin’ny masoandro, hita any amin’ny faritra ambanivohitra. Miasa ho an’izany, ohatra, ny Baobab+ Madagascar, ny Sunenergie Madagascar, ny Majinco, sy ny hafa. Mitondra vahaolana any ambanivohitra ireo orinasa mpamatsy herinaratra azo havaozina sy mora ireo noho ny lesoka ao amin’ny Jirama.
Ader* : Agence de développement de l’électrification rurale